Raha mba fantatrao mantsy: bebe 59 taona, vao manomboka mianatra | NewsMada
Raha mba fantatrao mantsy: bebe 59 taona, vao manomboka mianatra
Tompon’andraikitra amin’ny fahombiazan’ny ankizy, any an-tsekoly, ny ray aman-dreny. Tsy maintsy manara-maso ny fianarany izy, saingy inona moa ny hojereny eo raha izy lehibe aza, tsy mahay mamaky teny akory ? Izay indrindra ny antony nanokafan’ny fikambanana AVM ny sekoly ho an’ny olon-dehibe, ao amin’ny EPP Antandrokomby Mahitsy. Nanomboka ny volana febroary teo ny fianarana.
Marobe ny olon-dehibe tsy mahay mamaky teny sy manoratra, amin’iny faritra iny, raha ny nambaran’ny mpampianatra eny. Tsy vitsy ireo maniry ny hiatrika fianarana, saingy nomena tombony voalohany aloha ireo ray aman-drenin’ny mpianatra, ao amin’ity EPP ity. Anisan’ireo 23 namaly ny antso Ravaonarivo Catherine, 59 taona, manan-jafikely roa, mianatra ao amin’ity sekoly ity.
Monina eny Ampanataovana Ravaonarivo Catherine, ramatoa feno tsikitsiky lava, mbola manana fanantenana hisian’ny fivoarana eo amin’ny fiainany, na eo aza ny taonany. Izay indrindra mantsy no nahatonga azy hanapa-kevitra ny hianatra. « Mafy amiko ny tsy mahay manoratra sy mamaky teny, izay tena ilaiko andavanandro, na dia mamboly aza ny asako… Vao naheno ity fianarana ity aho dia nazoto », hoy izy.
« Isaky ny tolakandro ny fianarana. Mifoha amin’ny 3 maraina aho, mikarakara ny sakafon’ny mpiasa tany na tanimbary. Aterina izany, amin’ny 11 ora, ary miverina mody aho mamahan-kisoa. Rehefa izany, miomana sy mandeha mianatra. Ny ankizy no mahandro ny sakafo hariva, raha tara aho », hoy izy. Tsy mahita tsara ny mason’ny ankamaroan’ireo olon-dehibe ary somary sarotsarotra ny fifantohana sy ny fitadidiana, araka ny nambaran’ny mpampianatra azy ireo.